MADAXWEYNE DENI OO SI DADBAN KURAASTII PUNTLAND UGU TAXAY JIFIDIISA HOOSE - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandMADAXWEYNE DENI OO SI DADBAN KURAASTII PUNTLAND UGU TAXAY JIFIDIISA HOOSE
May 12, 2021 News Puntland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 5
KU: ISIMADA DAWLAD GOBOLEEDKA PUNTLAND
KU: GOLOHA WAKIILADA PUNTLAND
KU: SHACAB WEYNHAHA REER PUNTLAND
OG: MADAXWE KU XIGEENKA PUNTLAND
OG: GOLAHA FULINTA PUNTLAND
Sidaynu la wada socono Dawlad Goboleedka Puntland wuxuu ku dhisan yahay saami qaybsi udhexeeya dhamaan beelaha walaalaha ah ee samaystay Dawlad Goboleedka Puntland. Hadaba waxaanu cambaaraynaynaa in Maamulka uu madaxweynaha kayahay Siciid Cabdullahi Deni uu ku takrifalay saami qaybisigii lagu dhistay Dawlada Goboleedka Puntland. Waxaa cadayn u ah waxaa geeriyooday ama iska casilay xilkii Wasiirnimo xubnaha hoos ku qoran mudo laga joogo Sanad iyo dheeraad. Meeshii uu Madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni buuxin lahaa xilalkaa banaanaaday una magacaabi lahaa beelihii mudnaa ama saamiga u helay. Madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni wuu ka gaabsaday inuu magacaabo si hoose ayuu xilalkii ugu dhiibay masuuliyiin ka soo jeeda beeshiis gaar ahaan Jifadiisa . Waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa Wasiiradii baneeyey xilalka iyo jifooyinkooda :
Eng: Mohamed Xasan Ciiise (Ilaah hawnaxariisto)– (KaskiQabe) October 2020 . Wasiiro- Dawlaha Madaxtooyada Puntland. Wuxuu u magacaabay Siciid Abdi Nuur – Cismaan Mohamud (Bahdhulbahante)
Eng: Mohamud Xaaji Saalax – ( Siwaaq Roon) December 2020. Wasiirkii hore Kaluumaysiga iyo Khayraadka Bada. Wuxuu u magacaabay Nuur Muuse Cisman – Cismaan Mohamud ( Bahdhulbahante)
Professor: Ismaaciil Diiriye Gamadiid (Ilaah hawnaxariisto) ( Dhulbahante) May 2020 . Wasiirkii hore Deegaanka iyo Beeraha . Wuxuu u magacaabay Yasin Ali Qardho – Cismaan Mohamud ( Bahdhulbahante)
Waxaa intaa sii dheer in Madaxweyne Siciid Abdullahi Deni uusan weli magacaabin ugu yaraan Lix Agaasimayaal Guud iyo Agaasime Waaxyeedyo ilaa maalintii la doortay oo u xilalkii ugu dhiibay si hoose Jifidiisa qabiilooyinkii saami qaybsiga ulaaahana ay ka quusteen.
Farxan Saleebaan Guure – (Cumar Mohamud) March 2020- Agaasimihii Guud ee Wasaarada Arimaha Gudaha . Wuxuu u magacaabay Mohamed Warsame Ali – Cismaan Mohamud (Bahdhulbahante)
Ismaaciil Warsame Wacays – ( Leelkase) April 2020 – Agaasimihii Guud ee Wasaarada Dekedataha. Wuxuu u magacaabay Jibriil Yaasiin Mohamuud – Cismaan Mohamud (Bahdhulbahante)
w/Q Cabdi Beergaal
Fadlan iska hubiya qoraalada aan runta ku dhisnay ninka qoray Deni baa dad beeshiisa ah ku beddeley dad xilkoodii banneeyey haba yaraatee waa been aan raad lahayn ilaah ka cabsada
Ceeb loomadhinto, Siciid Denina caynka uu udhaqmayo waa laga warhayaa oo laga dheregsanyahay.
Reer Puntland waxay xaqdhawrayaan oo keli ah shimbirka midnimada iyo wadajirka Puntlandtooda, waana sababta looga gaabsaday in kacdoon lagasameeyo waxa uu Siciid Deni kukacay.
Sidaas oo ay tahay, duubabka guud ee beelaha uu xadgudubyada kusameeyay waa inay iyagu maqal iyo muuqaalba cod sare ugu muujiyaan tabashooyinka isasootaraya oo ay Issimada Guud ee Puntland, waxgaradka, cuqaasha, iyo culimadaba toos ugala xisaabtamaan waxa dhacaya.
Kollay Deni jagada kumawaarayo ee mar un buu gees inoodhaafi doonaa oo taariikhda Puntlandna baal madoow kagaqormi doonaa.
Ciyd Mubaarak Dhammaantiin.
Waxaan 100% ku taageersanaha Madaxweyne Deni- magacaabista uu sameeyey, waa cida Puntland Difaacda ee ciidanka u ah waa majeerteen keliya, gaar ahaana Mohamoud Saleban.
Cida cashuurta qaranka Puntland bixisaa waa majeerteen keliya- gaar ahaana Mohamoud saleeban.
Anigoo aan cidna gef iyo af-lagaado midna u gaysaneyn, LKN, Punland- waa iska leh oo dhiig iyo dheecanba u huray waa majeerteen, Gaar ahaana Mahomoud Saleban.
Nur jam says:
Merseyside ka yihiin my maxamudcsaleebaan xaraanta and ku doodeyso jooji.
Aniguba hanad Maxamuud Saleebaan ah baan ahay saaxiib (oo lillaahi ah), laakiin dulmiga iyo xaqdarrada majecli oo xabaal iyo xisaabta aakhiro ayaa iga dambeeya.
Xaqiiqada meeshan kujirta ee aalaaba aan hoos loo eegin aan idiin sheego: haddii uu Majeerteen Puntland culays weyn iskasaaray – dhan kastaba – haddee waa curadka Harti oo curadkuna isagaa ayaa reerka isuxilqaamiya sida caadiga ahba.
Puntland tolweynaa wada yagleeshay oo isku gacansaartay, cahdina kala saxiixday. Labo mid ayaa anaga noo bannaan inaynu sameyno:
(i) in aynu tolweynaha isugu yeerno oo toos ugu kalabaxno cahdigii Puntland lagu wada dhistay oo aynu Puntland anagu uharno.
(ii) in aynu tolweynaha xuquuqdooda sida ay yihiin ugu garanno oo aynaan waxooda kaga safaadin.
Taasaa caddaaladda Islaamnimada iyo insaannimadaba waafaqsan oo saxsan. Anaga ayaa Puntland canshuurteeda bixinna oo gacantana kuhayna qiil aynu tolka kale saamigooda kaga boobno inoo ma noqonayo abaddan. Runta iyo xaqa aynu kaxigno.
Cid aydin wax iskudarsateen safaad kaama mudna sideedaba, anaguna dhaqanxumadaas caado umalihin.